Who were Bengali, so called Rohingya?: VOA နှင့် Dr. Wakar Uddin ၏ အင်တာဗျူးကို ကျနော့်ချပချက်များ
VOA နှင့် Dr. Wakar Uddin ၏ အင်တာဗျူးကို ကျနော့်ချပချက်များ
[အဆိုပါ အင်တာဗျူးအောက်တွင် Comment ပေးခဲ့သည်ကို ပြန်လည်တင်ပြသည်]
Dr. Wakar Uddin ပြော - ရိုဟင်ဂျာလက်ထဲမှာ အခု တိုင်းရင်းသားလက်မှတ် မရှိပါဘူး။
အဖြစ်မှန် - ဘယ်ရှိမလဲ တိုင်းတပါးက ခိုးဝင်တဲ့ ခေါတောတွေပဲဟာ။
Dr. Wakar Uddin ပြော - အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့ လက်ထပ်လို့ မရပါဘူး။
အဖြစ်မှန် - ဘယ်လက်ထပ်လို့ ရမလဲ။ ရခိုင်သမီးပျိုတွေကို သွေးနှောချင်နေလို့ ရမလား။
Dr. Wakar Uddin ပြော - သူတို့လက်ခံရင် ကျနော်တို့ဖက်က ကျနော်တို့လည်း သူတို့နဲ့ပေါင်းဖို့အတွက် assimilation အတွက် ကြိုးစားပါမယ်။
အဖြစ်မှန် - မကြိုးစားပါနဲ့။ ရခိုင်တင်မက မြန်မာတိုင်းရင်းသားအားလုံးက ရိုဟင်ဂျာလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခေါ်တဲ့ (ဘင်္ဂလားက ခိုးဝင်သူတွေ) ကို ဘယ်တော့မှ လက်မခံပါဘူး။
Dr. Wakar Uddin ပြော - မြန်မာအစိုးရက ကြိုးစားရပါမယ်။
အဖြစ်မှန် - မြန်မာအစိုးရက ကြိုးစားရမတဲ့လား။ ဒီလောက် လုပ်စရာပုံနေတဲ့ထဲမှာ ပြည်ပခိုးဝင်တွေအတွက် ဘာများထပ်လုပ်ပေးရဦးမှာလဲ။
Dr. Wakar Uddin ပြော - ကျနော်တို့ ရိုဟင်ဂျာ ယဉ်ကျေးမှု က ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှု ရှိပေမယ့်။
အဖြစ်မှန် - စကားထဲက ဇာတိပြဆိုသလိုပေါ့။ ကျုပ်တို့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားအားလုံးက ယဉ်ကျေးမှုချင်း ကူးလူးယှက်နွယ်နေတယ်။ ခင်ဗျားတို့က သီးသန့်ကြီးဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါကို ကျုပ်တို့ တိုင်းရင်းသားပါလို့ ဖင်ပိတ်ငြင်းချင်သေးတယ်။
Dr. Wakar Uddin ပြော - အပြင်ကကြည့်ရင် သူတို့နဲ့ နည်းနည်းတူတယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ .... ဟိုမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ တယောက်မှ ရောလို့မရဘူး။
အဖြစ်မှန် - အေး ကိုယ်တိုင် အပြင်ဘက်ကကြည့်ရင် ဘင်္ဂလားနဲ့တူတယ်လို့ ၀န်ခံပြီးပြီပဲ။ ကျုပ်တို့ မြန်မာနဲ့က အပြင်ကကြည့်ကြည့် အတွင်းကကြည့်ကြည့် ဘယ်လိုမှမတူဘူး။ မင်းတို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ ရောလို့မရတာနဲ့ ငါတို့ဆီလာချင်သလား။
Dr. Wakar Uddin ပြော - ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အများကြီးကွာပါတယ်။
အဖြစ်မှန် - စကားကို ရှင်းရှင်းပြော။ ဟိုက မေးတာ မြန်မာပြည်က ဇာတိပဲလားတဲ့။ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါကို ဗြောင်မဖြေရဲလို့ ဝှေ့လည်ကြောင်ပတ်လုပ်နေတယ်။
Dr. Wakar Uddin ပြော - လူမျိုးတမျိုးကို တခြားလူမျိုးတမျိုးက၊ အစိုးရ government တခုက ဒီလို နှိပ်စက်တာ၊ human rights violations လုပ်တာ အမေရိကန်က ဘယ်တော့မှ သည်းခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အဖြစ်မှန် - နှိပ်လည်း နှိပ်မစက်ဘူး။ human rights violations လည်း မလုပ်ဘူး။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ တရုပ်ဖြူတွေလိုပဲ မြန်မာပြည်ကို ကျူးကျော်နေတာ။ ကျူးကျော်သူတွေကို အခုဆက်ဆံပုံက ပျော့လွန်းတယ်လို့တောင် ထင်တယ်။
လက်မခံနိုင်တာက ငါတို့ မြန်မာ တိုင်းရင်းသားအားလုံးပဲ။
ဟော့ဒီ မြန်မာ့မြေပေါ်မှာ ရိုဟင်ဂျာတွေ အတိအလင်း ခြေကုတ်လာယူချင်ရင် ငါတို့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားအားလုံး နှင်ထုတ်မှပဲ ဖြစ်မယ်။
ပါလက်စတိုင်းလိုတော့ တို့တွေ ဘယ်တော့မှ အဖြစ်မခံဘူး။
ကဲ ... လူသား သန်းခြောက်ဆယ်အရေးနဲ့
(နှစ်သန်းလို့ သုည အများကြီးတိုးပြောထားတဲ့) လက်တစ်ဆုပ်စာ ကျူးကျော်သူအရေး ဘယ်ဘက်ကလိုက်ကြမလဲ စဉ်းစားစမ်းပါ။
မဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံများနှင့် မဟာအင်အားကြီး မီဒီယာများ ခင်ဗျား။
Ashin Visarada Share ပြီ ဆြာသွန်း။ ကျေးဇူးပါ။
Nang Shwe Wot Hmoun Dr. Wakar Uddin ပြော - လူမျိုးတမျိုးကို တခြားလူမျိုးတမျိုးက၊ အစိုးရ government တခုက ဒီလို နှိပ်စက်တာ၊ human rights violations လုပ်တာ အမေရိကန်က ဘယ်တော့မှ သည်းခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
So why don't they go to America? Why don't they go to Saudi?
Thar Pu Mts အမေရိကန်က ဘယ်တော့မှ သည်းခံမှာ မဟုတ်ဖူးပြောရအောင် ငါတို့က အမေရိကန်ကို ကြောက်နေရတဲ့ကောင်တွေလား ။ စကားပြောတာကိုက ကျွန်စိတ်ကပြနေတယ်။
Ni Ni Sann ကြိုက်တယ် ဆရာ
Engyin Htun right!!! အမေရိကန်က သည်းမခံဖူးဆိုလဲ အမေရိကန်နိုင်ငံသားသွားခံပေါ့ ဘာလို့ ဒီမှာ ကုတ်ကပ်နေတုန်း ဟွန်း
မင်း စိုး share လိုက်ပြီ ဆရာသွန်း...
Thorn Nay Soe အစက လောလောဆယ် ကျနော်တို့ ပြဿနာ ရှုပ်လွန်းသဖြင့် ဘာမှ မပြောသေးမလို့ ဖြစ်ပါသည်။
ယခုတော့ VOA အင်တာဗျူးမှာ အချိန်ကိုက်လွန်းသည်ဟု မြင်သည်။
ဘန်ကီးမွန်း လာရန်၊ ဟို ဒါရိုက်တာ နှစ်ယောက်လာရန် ပြင်စဉ် ဒီအင်တာဗျူး ဘာလို့ လုပ်ရပါသနည်း။
ထို့ကြောင့် တုန့်ပြန်ရပါသည်။ သို့သော် ရိုဟင်ဂျာအရေးသည် ကျူးကျော်သူတစ်စုအရေးသာဖြစ်ပြီး ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး လုံးဝ မဟုတ်ကြောင်းကို အားလုံး သတိချပ်ကြရန် လိုပါသည်။
ရိုဟင်ဂျာကို ကျနော်က တရုပ်ဖြူကျူးကျော်မှု ကဲ့သို့အသွင်မျိုးသာ မြင်ပါသည် ခင်ဗျား။
Saw Tin Tun Aung အနောက်က ကုလားရော အရှေ့က တရုတ်ရော သတိထားရမယ့် အချိန်ရောက်နေပါပြီ။ ရခိုင်ဘက်မှာ ရိုဟင်ဂျာက ခြေကုတ်ယူဖို့ ကြိုးစားနေသလို မြန်မာပြည် အပေါ်ပိုင်းကို လည်း တရုပ်က ခြေကုတ်ယူနေပါပြီ။ ကြာရင် ခက်တော့မယ်ဗျို့။
Soe Tun let me share!
Nyein Chan Let me share brother.
Nay Soe ကျူးကျော်သူတွေကို အခုဆက်ဆံပုံက ပျော့လွန်းတယ်လို့တောင် ထင်တယ်။
Aye Chan Let me share.. sayar Thorn ...
Rakha Thandar ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ အနောက်မှာ ရန်သူတစ်စု၊မြောက်ပိုင်းမှာ ရန်သူတစ်စု ရှိလာခဲ့ပြီ...အဆိုးဆုံးကတော့ လူမျိုဖို့ ကြိုးစားလာတဲ့အထိကို အတင့်ရဲလာတာဘဲ...မြန်မာနိုင်ငံတော် အုပ်ချုပ်သူအစိုးရအနေနဲ့ လည်း ဒါကို လစ်လျူရှုထားမယ်ဆိုရင်တော့ နောင်နှစ်များစွာကြာလာတဲ့အခါ နိုင်ငံသားပဒိပက္ခတွေကြီးထွားလာတော့မှာအမှန်ပါဘဲ...( လက်ရှိ... အနောက်မှာ သူတို့ ကိုသူတို့ ရိုဟင်ဂျာနာမည်ခံ ဘင်္ဂလား နိုင်ငံသားတွေဟာ ခိုးဝင်လာတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ဘဲ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတစ်ခုပါလို့ အတင့်ရဲစွာပြောဆိုသုံးနှုန်းလာတာပါဘဲ...နောက်ပြီး အထူးသဖြင့် ဗားမားယူကေကန့် ပိန်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားအတွက်မဟုတ်ဘဲ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာကိုအသက်သွင်းဖို့ ကြိုးစားနေကြတဲ့အဖွဲ့ တစ်ခုလို့ သာမြင်ပါတယ်...ဒီအထဲက ၂ယောက်က မြန်မာပြည်လာမယ်ဆိုတော့ သူတို့ လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်..လိုအပ်ရင် အားလုံးတက်ညီလက်ညီနဲ့ မောင်းထုတ်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားရမယ်လို့ သုံးသပ်မိပါတယ်....ဒီကိစ္စဟာပေါ့သေးသေး ပြသနာမဟုတ်ပါဘူး....(ဘာသာရေးနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး..လူခိုးဝင်မှုနဲ့နိုင်ငံသားအရေးပါ...မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး နားလည်ထားပေးကြစေချင်ပါတယ်ဗျာ)
Win Sandar ပါလက်စတိုင်းလိုတော့ တို့တွေ ဘယ်တော့မှ အဖြစ်မခံဘူး။
Thuyein Soe Let's kick out this dog
Aye Mon Swe ‎"human rights violations လုပ်တာ အမေရိကန်က ဘယ်တော့မှ သည်းခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ " သည်းမခံနိုင်လည်း လဲသေလိုက်ကြဟေ့။ ငါတို့ကတော့ ဘယ်နည်းနဲ့မှ ဒင်းတို့တွေကို လက်မခံနိုင်ဘူး
Si Thu အပြင်က မီဒီဟာတွေက ကျတော့်စိတ်ထင် အထဲမှာ မီးများများလောင်လေကြိုက်လေပဲ...လောင်စရာနည်းလာလို့ အခုထရှို့တယ်လို့ပဲ မြင်တယ်..ကိုယ့်အိမ်ထဲလည်းကျုးကျော်နေသေး...သန်းခေါင်စာရင်းထဲဝင်ပြီး အမွေပါလာတောင်း...ပြီးရင် တအိမ်လုံးသိမ်းပိုက်သွားမှာကို ငါတို့က ဒီအတိုင်း လက်ပိုက်ကြည့်နေရမှာလား...VOA(voice on air....no action)ရဲ့...
ဘသောင်း ဟိန်း ဒီကိစ္စ လက်တွေ့ကျကျ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမှာပါ။ ပြတ်ပြတ်သားသားပဲပြောရမှာပါ။
Myo Chit Thu အထဲ မှာက အိမ်တွင်း သူခိုးတွေ က သူတို့ အတွက် ခိုးဖို့ ပဲ သိနေ ။ အပြင်က နေ နိုင်ငံ ကို အပေါ်ပိုင်း ရော အောက် ပိုင်းရော ရသမျှ ဝင်မျို နေပီ ။ ဒီကြားထဲ ညီညွတ်မူက မရှိ ။ အထူး ဂရုစိုက်ဖို့ လိုပီ ။ များမကြာမီ မြန်မာ နိုင်ငံ နဲ့ မြန်မာ လူမျိုး ပျောက်တေါ့မယ်
Posted by Anti Rohingya (Bengali Muslim) - Anti Terrorist at 1:13 PM
ဒီတိုင်းပြည်အောက်တန်းကျတာလဲပြောမနေနဲ့ ဒီလို အတူယှဉ်တွဲမနေနိုင်မနေတတ် ပုဇွန် ဦးနှောက်နဲ့ လူတွေ နဲ့ပြည့်နှက်နေတာ